अचानक बिग्रिन सक्छ मिर्गौला, थाहा पाउने कसरी ? - ramechhapkhabar.com
अचानक बिग्रिन सक्छ मिर्गौला, थाहा पाउने कसरी ?
मिर्गौला बिग्रिएर जीवनमा तनाव भोगेका व्यक्ति धेरै भेटिन्छन् । विभिन्न कारणले मिर्गौला बिग्रिन्छ । तर, समस्या के भने कुनै लक्षण नै नदेखाई मिर्गौला बिग्रिन सक्छ । झुक्किएर मिर्गौला गुमाउनुपरेको पनि धेरै भेटिन्छन् । खासगरी दीर्घरोगीको मिर्गौला कुनै लक्षण नै नदेखिई बिग्रिन सक्छ ।